Ny fahazarana 7 amin'ny fampiharana an-tranonkala 2.0 mahomby | Martech Zone
Alatsinainy Oktobra 30, 2006 Alarobia, Oktobra 8, 2014 Douglas Karr
Dion Hinchcliffe dia nanoratra lahatsoratra tsara tao amin'ny Ajax Developers Journal, ity ny sombintsombiny tiako indrindra:
Ireo zava-dehibe ilaina amin'ny fampiasana Internet 2.0
Fampiasana mora foana no endri-javatra lehibe indrindra amin'ny tranokala, fampiharana amin'ny Internet na programa.
Sokafy araka izay azo atao ny angon-drakitrao. Tsy misy ny ho avy amin'ny angona angon-drakitra, mifehy azy fotsiny.
Ampiasao amin'ny fomba mahery vaika ny tadivavarana amin'ny zavatra rehetra. Esory ny tadivavarana izay toa tsy maninona ary manasongadina ireo izay manome valiny.
Kitapo famoahana mitohy. Arakaraka ny maha-lehibe ny famotsorana azy no vao mainka mahasosotra azy (miankina bebe kokoa, mandamina bebe kokoa, manakorontana bebe kokoa.) Ny fitomboana voajanahary no mahery indrindra, mahay mandanjalanja ary mahazaka.
Ataovy anisan'ny rindrambaiko ny mpampiasa anao. Izy ireo no loharanom-pahalalanao, loharano, ary filanao manandanja indrindra. Manomboha mahatakatra ny maritrano sosialy. Mialà amin'ny fifehezana tsy ilaina. Na mety handeha ho any an-toeran-kafa ny mpampiasa anao.
Avadiho ho toy ny sehatra ny rindranasao. Matetika ny fampiharana iray dia manana fampiasa efa voafaritra mialoha, ny sehatra dia natao ho fototry ny zavatra lehibe kokoa. Raha tokony hahazo karazana fampiasana tokana amin'ny rindrambaiko sy angon-drakitrao ianao dia mety ho an-jatony na an'arivony amin'izy ireo.
Aza mamorona fiarahamonina sosialy mba hanana azy ireo fotsiny. Izy ireo dia lisitra lisitra. Fa omeo hery ireo mpampiasa aingam-panahy hamorona azy ireo.
Hanampy entana iray hafa aho, na hanitatra amin'ny 'Ease of Use'. Ao anatin'ny fanamorana fampiasana dia misy singa 2:
Fampiasana - ny fomba fiasa izay raisin'ny mpampiasa amin'ny fanatanterahana asa dia tokony ho voajanahary ary tsy mila fampiofanana be loatra.
Volavola tsara - Halako ny hanaiky izany, fa ny endrika miavaka dia hanampy. Raha manana fampiharana maimaim-poana ianao dia angamba tsy dia zava-dehibe loatra; fa raha mivarotra serivisy ianao, dia antenaina hisy sary sy lamina pejy mahafinaritra.
Avadiho ho toy ny sehatra ny fampiharana anao ary ny famoahana tsingerina famoahana mitohy dia samy manome ny teknolojia 'widget, plugin, na add-on' Raha misy fomba fananganana ampahany amin'ny rindranasao mamela ny hafa hiditra ao anatiny, dia hitrandraka fivoarana lavitra mihoatra ny rindrin'ny orinasanao ianao.
Tsy azoko antoka fa ekeko ny 'Sokafy ny angon-drakitrao' fa manaiky ny hampiasana ny angon-drakitrao aho. Ny angon-drakitra misokatra amin'izao vanim-potoana izao dia mety ho nofy ratsy amin'ny fiainana manokana; na izany aza, antenaina ny fampiasana tahirin-kevitra omen'ny mpampiasa anao. Raha manontany ahy ianao hoe ahoana no itiavako ny kafe, dia antenaiko fa amin'ny manaraka ahazoako kafe dia io no tiako. Raha tsy izany dia aza manontany ahy aloha!
Tags: fampandrosoanasehatra2.0 web